Mudaaharaadyo Ka Dhacay Gobolka Catalonia – AWDALLAND STATE
HomeUncategorizedMudaaharaadyo Ka Dhacay Gobolka Catalonia
Mudaaharaadyo Ka Dhacay Gobolka Catalonia
October 3, 2017 Uncategorized, Wararka Soomalida2
WASHINGTON. D.C — Boqollaal ruux ayaa Isniinti shalay isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada Barcelona si ay uga madaaharaadaan gacanta adag ee ay ciidanka booliska Spain kula dhaqmeen dadki usoo baxay aftidi gooni isu taaga ee Axadi hore ka dhacay gobolka Catalonia.
Dibadbaxayaasha oo intooda badani ahaa arday ayaa ruxayay calanka madaxbannaanida Catalonia, waxaa kale oo ay wateen boorar ay ku dalbanayeen dimoqraadiyad.
Bannaanbaxyada ayaa sidoo kale ka dhacay dhowr magaalo oo ku yaalla gobolka Catalonia oo ay ka mid yihiin Shiiroona iyo Yeyda (Girona iyo Lleida).
Saraakiisha gobolkaCatalonia ayaa sheegay in ciidanka booliska ay dhaawaceen ku dhawaad 900 oo ruux Axadi kadib marki ay isku dayeen in ay ka hor-taagaan in dadkani ay codadkooda ka dhiibtaan aftida gooni isu taaga Catalonia.
Nin Soomaali ah oo loo dacweeyay ‘weerar argagixiso